02 | March | 2013 | Danya Wadi
By danyawadi March 2, 2013 Leaveacomment
(၁) သေချာတိကျခြင်း ( Accuracy ) (၂) လိုက်လျောညီထွေကျင့်ခြင်း ( Adaptability ) (၃) စွန့်စားစိတ်ရှိခြင်း ( Adventure ) (၄) နှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်ခြင်း (Agreeableness ) (၅) တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိခြင်း ( Ami-biting ) (၆) အကောင်းအမြတ်ကို သိမြင်ခြင်း (Appreciation of the Beautiful ) (၇) သတိရှိခြင်း ( Caution ) (၈) ကြည်လင်ရွှင်ပြခြင်း ( Cheerfulness ) (၉) သန့်ပြန့်စင်ကြယ်ခြင်း ( Cleanliness ) (၁၀) စွဲမြဲစူးစိုက်ခြင်း (Concentration ) (၁၁) ရောင့်ရဲတင်းတိမ်ခြင်း ( Contentment […]
သာကေတ ဂရက် လှိုင်သာယာသို့ ကူးဆက်လာ ရန်ကုန်၊ မတ် ၂။ ယနေ့ည ၁၂ နာရီ ၂၀ မီနစ်ဝန်းကျင်တွင် လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊၃ ရပ်ကွက်၊ ဗိုလ်ချုပ်လမ်း(၃ ထိပ်)ရှိ အောင်ပရဟိတ ကျောင်းတိုက်၏ ခေါင်မိုးပေါ်သို့ ဘာသာခြားတစ်ဦး တက်ရောက်နေ သည်ဟူသော သတင်းကြောင့် အဆိုပါရပ်ကွက်တွင်း ရုန်းရင်းဆန်ခတ် ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရပ်ကွက်တွင်း နေထိုင်သူ လူအချို့က တွေ့မြင်ခဲ့၍ ဟစ်အော်ရာမှ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံး တုတ်၊ ဓါးဆွဲကာ ကျောင်းဆောင်အတွင်းဝင်ရာက်ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် အဆိုပါ ကျောင်း ဆောင်အား သက်ဆိုင်ရာ ရဲအရာရှိများက ဝိုင်းဝန်းပိတ်ဆို့ထားဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ကျောင်းတိုက်အတွင်းရှိ သံဃာတော် တစ်ပါးက မိန့်သည်။ “ကျောင်းဆောင်ရဲ့ ခေါင်မိုးပေါ်မှာ လူကိုမြင်လို့ ဓါတ်မီးနဲ့ထိုးကြည့်ပြီး ဘယ်သူလဲလို့ မေးတယ်။ ပြန်မဖြေဘူး။ ဒါပေမယ့်ဘုန်းကြီးကျောင်း […]
Saturday, March 02, 2013 Arakan Burma, Burmese security forces, Kaladan Press, Killed, Rakhine, Rohingya Maungdaw, Arakan State: Secrete killing of Rohingya community is going increased in Maungdaw since beginning of 2013, according to an officer from Maungdaw, who didn’t want to named. The dead body of Sayed Ullah on the ground “There are more than […]
63 Rohingya Muslims found adrift off Indonesia coast
Saturday, March 02, 2013 asylum seekers, Indonesia, Press TV, Rohingya News 124 Rohingya Rescued sailing adrift in Indonesian waters PressTV: March 01, 2013 Sixty-three Rohingya Muslims, including 23 children, fleeing the violence in Myanmar have been found adrift inawooden boat in western Indonesia, in the second such event this week. Indonesia police said […]
ဦးဝီရသူတရားခွေလှိုင်သာယာတွင်ခေတ်ထပြီးနောက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုများမင်းမဲ့ စရိုက်ပုံစံဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရ ….
By danyawadi March 2, 20133Comments
Kyaw Soe Naing shared Myanmar Muslim Net‘s photo. ဦးဝီရသူ တရားခွေ လှိုင်သာယာတွင်ခေတ်ထပြီးနောက် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ပိုင်ဆိုင်မှုများ မင်းမဲ့ စရိုက်ပုံစံဖြင့် ဖျက်ဆီးခံရ မြို့နယ်သာသနာရေးရာကောင်စီ ဥက္ကဌက ကြိုတင်တိုင်ကြားထားခဲ့သော်လည်း ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပိာန်းအောင် မတ် ၂အစ္စလာမ်ဘာသာအားမမှန်သတင်းဖြင့် ပောာပြောတိုက်ခိုက်သူအဖြစ် မြန်မာမွတ်စလင်မ် အသိုင်းအ၀ိုင်းတွင်နာမည်ကြီင်္းသည့် ဦးဝီရသူ ပောာပြောသည့် တရားခွေများ လှိုင်သာယာတွင် ပျံနှံ့ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် မင်းမဲ့စရိုက်ပုံစံဖြင့် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်များပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ခန်းများနှင့် ဘာသာရေးအဆောက်အဦးတစ်ခုတို့ တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း လိုင်သာယာ တွင်နေ ထိုင် သည့် မြန်မာမွတ်စလင်မ်တစ်ဥိးက myanmarmuslim.net သို့ပြောသည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဆူပူသောင်းကျန်းလိုသူအချို့က ဘာသာရေး အကြောင်းပြုကာ ဖျက်ဆီးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက်ဖန်တီးလှုံဆော်မှုများရှိ နေမှုများရှိနေကြောင်း ကို အစ္စသာသနာရေးရာကောင်စီ လှိုင်သာယာမြို့နယ် ဥက္ကဌ ဦးဇော်မင်းလတ် […]
Oh, Places You’ll Probably Never Go: South of Bangladesh Saturday, March 02, 2013 [Link to original article right above] February 26, 2013 by @mrmatias The Rohingya people are native to Myanmar but ofadifferent ethnic group and therefore considered illegal immigrants. According to the UN they are one of the most persecuted minorities in the […]
သတင်းရေးချင်ရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ် စောင့်ထိန်း သင့်ပါရဲ့
O’Laie Manzu 2.3.2013 စာနယ်ဇင်းထိန်းချုပ်မှုတွေ ပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံမှာ သတင်းစာတွေ၊ ဂျာနယ်တွေ ပလူပျံပေါ်ပေါက်လာနေချိန်မှာ စာနယ်ဇင်းလောကထဲကို အပြိုင်အဆိုင်တိုးဝှေ့ ဝင်ရောက်နေ ကြ တာကို သတိထားမိပါတယ်။ အသံဖမ်းစက်တွေကိုယ်စီနဲ့ အလုအယှက်သတင်းရယူနေကြတဲ့ လူငယ်လေး တွေ အမြောက်အများကိုတွေ့ရတာလည်း အားရကျေနပ်စရာ ပါဘဲ။ တက်သစ် စ မီဒီယာ နုနုရွရွတွေ ပေါ်ထွက်လာသလို ကိုယ်ပိုင်မီဒီယာတွေ တည်ထောင်ဖို့အတွက် လုံးပမ်းနေကြတာလည်း မနည်းလှ ပါဘူး။ အတွေ့အကြုံရင့်ကြပ်တဲ့ ဝါရင့် သတင်းသမားတွေလည်း လွတ်လွတ်လပ်လပ်လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ရလာတဲ့အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေကြတာကို တွေ့ရတာလည်း အားရစရာပါဘဲ။ အချိန်တိုအ တွင်းမှာ သတင်းမီဒီယာတွေ တဟုန်ထိုးကြီးထွားလာ တာဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒီမိုကရေစီစနစ်အမြစ် တည်လာပြီဆိုတဲ့ လက္ခဏာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာဘဲ လွတ်လပ်စ စာနယ်ဇင်း နည်း စနစ်သစ်ရဲ့အောက် မှာ […]